Akwukwo ozi nke Blog nke ihe ngosi akuko nke Indian. THE INDIAN FACE
Oge mbu BMX Trif Back in History: dị ịtụnanya
Onye na-agba igwe New BMX. Jed Mildon mere akụkọ ihe mere eme na May 28, 2011 site na ịbụ onye mbụ jiri ụgbọelu rịa ihe ịga nke ọma mgbe ọ rụsịrị akara ngosi okpukpu atọ n'oge Unit T3 Mindtrick Jam na Taupo, New Zealand. Mildon, onye gbara afọ 24 n'oge ahụ
Nchịkọta usoro aghụghọ kacha mma nke snowboard nke 2014
Anyị ahụtala vidiyo a na-achịkọta aghụghọ kachasị mma na jumps na sọọdụ snow hụrụ na duringntanetị n'oge afọ gara aga 2014. Na blog a, anyị na-ekwu maka kpakpando, nkà dị ukwuu, ndị na-egwu egwuregwu na ndị nwere ezigbo mgbawa nke iba na skis
Ngosiputa BASE wulite: vidiyo abuo igaghi agu
Taa, anyị na-ewetara vidiyo ngosi abụọ nke BASE Jumping nke Richi Navarro, bụ igwe nchekwa BASE nke otu anyị The Indian Face. Nke mbu bu ima anwansị, na onye mbu, site na ime njem na Boí-Taüll Station (Lleida). Egwu. Nke abụọ bụ jumps abụọ ọzọ site na dinta adrenaline a
Akwụkwọ a na-atụ aro: Snowboard: aghụghọ na usoro dị omimi
Taa, anyị na-ewetara gị nkwanye nke akwụkwọ bara uru nke ukwuu ma ọ bụrụ na ihe gị na-enwu enwu n'ụzọ anwụ. A na-akpọ ya "Snowboarding: aghụghọ na usoro dị iche iche" nke Alexander Rottmann; Mbipụta ọhụụ sitere na 2010, ọ dị na Spanish ma nwee akwụkwọ ozi dị iri isii na isii banyere nkwadebe
Ihe kachasị dị nro na-adọkpụ na snow
Board Snoogee Echiche dị mfe, nyefee bọọdụ ahụ na snow. Agbanyeghị, nsonaazụ nsonaazụ adịghị anya dị ka ihe ga-aghọ ejiji. Ọ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ nwa oge, ọ ga - ekwe omume, mana ọ bụrụ na itinye ego na sọọsụ ị nwere ike ghara ịchọ imefu ya na sọdụ
Akwụkwọ gbasara mmalite egwuregwu ndị dị egwu na Canal Historia
Taa anyị na-eso gị ekerịta akụkọ na Channel Channel na-emepe emepe na ebido n’egwuregwu egwuregwu ndị kacha njọ gburugburu ụwa, ma ikuku na udu mmiri, yana egwuruegwu na egwuregwu ọhụụ nke pụtapụtara n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ebube vidiyo nke Elias Ambühl
Anyị ekwuola banyere Elias Ambühl na otu akụkọ na blog a na Jenụwarị 24. N'ime ya anyị na-agwa gị na a mụrụ Elias na Machị 26, 1992 nakwa na ọ bụ onye Switzerland na-agba efe. Ọ tụọla aka na slopstrong na asọmpi FIS Freestyle World Ski 2013.
Mmalite nke Skate: akwụkwọ nke Dogtown na ndị Z-Boys
Ọ bụrụ na taa ịnwere oge ụfọdụ, ị maghịkwa itinye ego ya, anyị na-akwado ka ị lelee akwụkwọ a. Nke a bụ Dogtown na The Z Boys, edepụtara na Spanish, site na 2001 ma Stacy Peralta duziri ya.
Anyị na-agba ịnyịnya: akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme nke Snowboarding
Dịka onye hụrụ adrenaline na snowboard ị nọ, taa anyị na-ewetara gị akwụkwọ ihe osise nke ị nweghị ike ịkwụsị ilele ... nke a bụ Anyị Ride: akwụkwọ nke akụkọ ihe mere eme nke Snowboarding. Aka na aka site n’aka Ọkụ ma mepụta Grain Media, We Ride bụ akwụkwọ akụkọ na-atọ ụtọ gbasara akụkọ ịkwọ ụgbọ mmiri.
Ihe nkiri sịnịma freide nke Candide Thovex
Candide Thovex na-enwe ntinye nke otu kpakpando kachasị ukwuu na mbara ụwa freeski. Dị ka ya onwe ya na-ekwu mgbe niile: "M ka skai na-ekwuchitere m." Taa, anyị na-ewetara gị vidiyo na-egosi freeski virtuoso nke ị nwere ike ị na-eche na ọ bụ ezigbo nwa na mmadụ mbụ.
Ogwe dị ịtụnanya maka skate na snowboard
Taa anyi choro ka anyi juo gi anya na vidio a anyi choputara ma kpagbuo anyi. Guysmụ nwoke nọ na Signal Snowboards haziri ma soro ndị ọrụ Lithe rụkọọ ọrụ na bọọdụ enwere ike iji efe efe kamakwa iwere ya na sno snow.
Nke kacha mma nke Mountain Bike na 2014
Taa, anyị chọrọ ịkọrọ gị wee gosi gị vidiyo Mountain Bike kachasị mma emere na 2014 Battle of Cairns 2014 Nnwale asọmpi Mountain Bike nke mba dị egwu nke mere n'ime ọhịa echekwara ụbọchị mmiri. Odot ẹkpebe enye.
Vidiyo skate kachasị mma na 2014 dịka Red Bull si kwuo
Vidiyo skate kachasị mma na 2014 dịka Red Bull Taa anyị chọrọ igosi gị nchịkọta nke vidiyo skate kachasị mma edekọtara na 2014, site n'echiche nke nnukwu egwuregwu dị egwu: Red Bull. Kporie ya! Echefuola na Ordos: obodo mmụọ Otu ìgwè nke skateboarders si gburugburu ụwa
Akwụkwọ skate 10 tụrụ aro nke ukwuu
Akwụkwọ skate 10 na-atụkarị aro Passionate gbasara bọọdụ na skate, taa anyị na-akwado agụ 10 ị ga-eburu n'uche ma ọ bụ ee. Fuck you dimkpa Akwụkwọ a na-anakọta mkpokọta foto nke Glen E. Friedman banyere ụwa nke punk, hip hop na skate. Ihe odide Zboys kọwara
Bọọlụ sọmpi: vidiyo abụọ nke aghụghọ bọọlụ dị egwu
Egwu bọọlụ: vidiyo abụọ nke aghụghọ bọọlụ na-atọ ụtọ Ọ bụrụ na ịchọrọ bọọlụ na freestyle, foto ndị a agaghị ahapụrụ gị ihe ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nweghị mmasị n’egwuregwu bọọlụ ma ọ bụ nwee mmasị n’egwuregwu skateboard ma ọ bụ egwuregwu snow, anyị na-eche na ị ga-enwekwa ike ịchọpụta ihe ụfọdụ nwere ike iji bọl mee.
Egwuregwu egwu kachasị ewu ewu maka oge opupu ihe ubi / ọkọchị
Egwuregwu egwu kachasị ewu ewu maka oge opupu ihe ubi / udu nmiri Mkpesa Bungee bụ egwuregwu dị oke egwu ebe mmadụ na-ama jijiji site na nnukwu ebe ọ bụla n'ime ihe efu, nke ejiri eriri na-agbanwe amalite. Enwere ike ịme elu Bungee site na ọtụtụ ihe dị iche iche, dịka àkwà mmiri, ụlọ ndị nwere elu, oke osimiri
Uzo eji aga ebe eji agba ugba na ulo nke eji efe efe
Uzo anyi ji aga njem ugbo elu nke eji eme ugboala nke eji akpo ugboala bu Sergio Layos bu otu n’ime ndi isi BMX di nkpa. Oge mbụ ọ gbara igwe kwụ otu ebe, ọ dị afọ 11. Na 13, ọ bụ onye nke abụọ na Portuguese World Championship
Didga the skater cat bụ kpakpando nke skatepark ya
Ọ bụrụ n ’ị na-enwe mmasị nwamba na kwa skate, anyị achọtala vidiyo na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Are ga-aga nwamba Didga, onye nwe ya na onye nwe skatepark ya n'ihi na ọ bụ ihe dị na skateboard. Ibu ibu gị n’azụ skateboard, gbagoo n’elu ebe a na-agbago ugwu
Wakeboarding na a Ferrari F50
Lee lee vidio dị egwu anyị hụrụ. Anyị maara na ị ga-ahụ ya n'anya. Know maara ịmụrụ anya? Ọ mejupụtara omume yiri sọfụ nke ejiri bọọdụ a na-ejikọ na eriri nke ụgbọ mmiri, ebe ọ bụ ọzụzụ na-eme ka ọ dị mma.
7 'dị egwu' na egwuregwu na-atọ ụtọ ị kwesịrị ịmara
Taa, anyị chọrọ igosi gị ọtụtụ egwuregwu siri ike ma na-achọ nghọta, ụfọdụ n'ime ha nwetụrụ oke, na-amalite ụdị ejiji n'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, anaghị akwụsị ịgbakwunye ndị na-eso ụzọ yana anyị chere na ị ga-achọ ịma. Ọbụlagodi ụfọdụ n'ime ha enweghị usoro iwu n'ihi ihe egwu ọ na-anọchi anya ya.
Mountain Bike dị na Jamaica, vidiyo dị ịtụnanya
Jamaica, agwaetiti Caribbean gbara gburugburu na Greater Antilles, nke ọnụ ọgụgụ ndị bi nde atọ, 600km site na Central America na kilomita 150 ndịda nke agwaetiti Cuba, bụ ebe omumu nke nnukwu ndị akụkọ abụọ ga-abụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme: Bob Marley na egwu egwu na Usain Bolt
My enyi bu Mountain Biker
Anyị ahụtala vidio a na-atọ ụtọ nke na-egosi ihe isi ike mmadụ nwere ike inwe mgbe ọ nwere di na nwunye na-ahụ maka ịgba ịnyịnya, ọkachasị Mountain Biking, mgbe ị na-esoghị enwe ntụrụndụ a. Nwam nwanyi bu ugwu ugwu